Miaro ny fitsipik'Andriamanitra eo anatrehan'ny fanoherana
"Dia naniraka olona hankany aminy kosa also hanao hoe: Asa lehibe no ataoko, ka tsy afa-midina aho; nahoana no hilaozako midina any aminareo ny asa ka hatsahatra?" - Neh. 6:3.
Efa manana olona voaomana hiaro ny asany amin'izay mety ho hery mahataona rehetra Andriamanitra. Hoderaina sy homem-boninahitra Andriamanitra amin'izany. Rehefa miasa ao amin'ny irak'Andriamanitra ny Fanahy Masina dia izao no havalin'io iraka io: "Inty aho, Iraho aho". Naneho ny maha-fitaovana azon'Andriamanitra ampiasaina azy i Nehemia tamin'ny fandringanana ireo hevi-diso sy tamin'ny famerenana indray ny fitsipiky ny lanitra. Dia nomen'Andriamanitra voninahitra izy.
Olona marina sy mahatoky amin'ny lalàna no hampiasain'Andriamanitra, dia olona izay tsy ho voahozongozon'ny fitak'ireo efa jamba ara-panahy.
Nofidin'Andriamanitra hiara-miasa Aminy i Nehemia satria hitany fa vonona ny hiara-miasa amin'ny Tompo izy mba hamerina indray ny fitsipik'Andriamanitra. Fitaka sy teti-dratsy no nampiasaina hamotehana ny fahatokiany, saingy tsy nanova azy ny kolikoly. Tsy nekeny ny ho simban'ny tetik'ireo lehilahy ratsy fitondrantena sy efa voakarama hanao asa ratsy.
Tsy navelany hisy hampitahotra azy mba handeha amin'ny lalan'ny hakanosana. Tsy nitazam-potsiny izy raha nahita tsy fahamarinana niseho ka nanaiky mangina izany tao am-pony. Tsy navelany hihevitra ny olona fa diso làlana izy. Nijoro tsy azo nohozongozonina amin'ny marina izy ary tsy nekeny na dia kely monja aza ny hanimbazimba ny fitsipika efa napetrak'Andriamanitra. - RH, 2 May 1899.
Tsy maintsy hisetra fanoherana isan-karazany toy ireo nanorina ny mandan'i Jerosalema isika; saingy raha miambina sy mivavaka isika ary miasa mafy tahaka azy ireo, dia Andriamanitra no hiady ho antsika ka hampandresy antsika (...) Mila mandeha amin-toky tsy voahozongozona isika fa hanome fandresena lehibe sy sarobidy ho an'ny fahamarinany Andriamanitra. Raha miankina amin'i Jesôsy isika dia hanana hery mitondra faharesen-dahatra fa manana ny fahamarinana isika. - RH, 6 Jolay 1886.